Version 0.9.7.2 – Shortened shortcodes
July 29, 2015 site na rịọ Ahapụ a Comment
Ntọhapụ ụgbọ okporo ígwè emesịala chikotara ọsọ, n'ihi ya, anyị bụ ndị mpako na-ewetara ọhụrụ a version.
Nke a version fixes Google proxy ọzọ, a na-eme n'ihi na e nwere ihe ndị anyị na n'ezie apụghị ịchịkwa. Ma ọzọ, ọ na-arụ ọrụ.
The ọzọ mgbanwe bụ ụfọdụ fixes na shortcodes, i nwere ike ịgụ ọtụtụ mma akwụkwọ na-esonụ njikọ:
Shortcode nkwado na Transposh wordpress plugin
Isi mgbanwe na-agụnye ndị ọzọ [tpe] shortcode nke e kwukwara n'elu nke okenye .
A koodu na-eji maka onwe kpuchikwara Koodu, ebe ọ dịghị mkpa imechi mkpado, nke a bụ n'ihi a caveat na wordpress nke na-akpata
koodu parsing na-aga berserk Mgbe agwakọta onwe-nchọ na mmechi shortcodes.
Ọzọkwa, ọ dịghị mkpa na ezipụta ="y" ihe ọ bụla ọzọ, Ya mere ugbu a [tpe mylang] ga-arụ ọrụ na mmepụta: ig
Anyị na-agba gị ka ị na nkwalite, na-enwe ọhụrụ a version.
Version 0.9.7.1 – Anyị nwere ọhụrụ na saịtị
July 22, 2015 site na rịọ Ahapụ a Comment
Ihe mbụ mbụ, ga-amasị anyị nke ukwuu na-ekele Christopher si LPK Studio – http://lpkstudio.com/ maka ọhụrụ imewe nke anyị website, ọhụrụ a website bụ akpatre ruo taa weebụ ọhụrụ ụkpụrụ na kwesịrị anya na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
N'ezie na anyị ụtọ na-arụ ọrụ na Christopher na nke a, na ọ bụ nnọọ oru oma, anabata na maara ihe dị anyị mkpa tupu anyị jụrụ 🙂
Ọhụrụ website na-esonyere ọhụrụ ntọhapụ, ihe ọ bụla isi n'ebe a, ma ole na ole chinchi gara ụzọ nke Dodo.
Ị nwere ike ọzọ na-eji + akara n'ime nsụgharị
Na oge ụfọdụ, ogologo paragraf aghọtaghị kwesịrị ekwesị akpaka nsụgharị si Google
Ikpochapụ ochie nsụgharị mere n'ezie na-arụ ọrụ 0.9.7.0
Kporie ọhụrụ version, ma hụ na ị nweta nkwalite a zuru version, ya free.